တရုတ် Oral Sampling Foam Swab ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ | J.able
အဏုဇီဝဗေဒနမူနာ စုဆောင်းခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဖြေရှင်းချက်
ဓာတ်ခွဲခန်း စားသုံးနိုင်သော ဖြေရှင်းနည်းများ
Cleanroom Swab ဖြေရှင်းချက်များ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် Sinusitis Sponge Swab
15ml၊ 50ml Falcon Centrifuge Tube
ခံတွင်းနမူနာ Foam Swab
ထုတ်ကုန်အမည် နမူနာ Foam Swab
ထိပ်ဖျားရုပ် Polyurethance Foam ၊
သိပ်သည်းဆ 1.75 ပေါင်/ဖြတ်
နမူနာများစွာကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် နမူနာများ လျင်မြန်စွာ ထုတ်ယူခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မျိုးဗီဇနှင့် DNA နမူနာများကို ကောက်ယူခဲ့သည်။
အထုပ်ကိုဖွင့်ပြီး sampling swab ကိုထုတ်ပါ။
နမူနာကောက်ယူပြီးနောက် နမူနာပြွန်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
နမူနာ swab ၏ ကွဲထွက်သည့်နေရာတစ်လျှောက်တွင် swab rod ကို ချိုးပြီး swab ခေါင်းကို နမူနာပြွန်ထဲတွင် ထားခဲ့ပါ။
ပိုက်အဖုံးကို တင်းကျပ်ပြီး စုဆောင်းမှု အချက်အလက်ကို ညွှန်ပြပါ။
စျေးကွက်နှင့် စျေးဝယ်သူ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အဖြေကို သေချာအောင် မြှင့်တင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအာမခံချက်အစီအစဉ်ရှိပြီး Factory source China Wholesale Sterile Medical Sampling Collection Foam Transport Swabs သည် အမှန်တကယ်တွင် Factory source အတွက် တည်ထောင်ထားကြောင်း၊ Any involves from you may be paid out with our greatest notice!
စက်ရုံအရင်းအမြစ်တရုတ် Sponge Nasal Swab , Nasal Swab , We aretrying our best to make more customers happy and satisfy. တန်းတူညီမျှ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ယခုမှစပြီး အနာဂတ်ကာလအထိ အောင်နိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆထားသော ဤအခွင့်အရေးကို အခြေခံ၍ သင့်လေးစားအပ်သော ကုမ္ပဏီနှင့် ကောင်းမွန်သောရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးသားစွာမျှော်လင့်ပါသည်။
With this motto in mind, we have now grow to be one among quite possibly the most technologically innovative, cost-efficient, and price-competitive manufacturers for China OEM China Swab Nasal Wholesale Factory Throat Foam Swab Nasal Sample Collection Medical Sterile Sponge Swab, We သင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်နှင့်အပြန်အလှန်ထိရောက်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလက်ထပ်မှုကိုရယူရန် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်စောင့်မျှော်နေပါသည်။
China OEM China Foam Tip Swab, Sponge Swab Foam , Customer satisfaction is our first goal. ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေစေရန်ဖြစ်ပြီး လွန်ကဲသောအရည်အသွေးကို လိုက်လျှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လက်တွဲ၍ သာယာဝပြောသော အနာဂတ်ကို အတူတကွ တည်ဆောက်ရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးသားစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
ယခင်- ခံတွင်းနမူနာ Foam Swab
နောက်တစ်ခု: HPV Sme ar Cervical Sampling Kit
ဗိုင်းရပ်စ်သည် နျူကလိစ်အက်ဆစ် မော်လီကျူးတစ်ခုနှင့် ပရိုတင်း သို့မဟုတ် ပရိုတင်းတစ်မျိုးသာ ပါဝင်ပြီး အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ရိုးရှင်းပါသည်။ ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိသောကြောင့်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုယ်တိုင်က ပုံတူပွားခြင်းမပြုနိုင်သော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ပြန်ပွားရန်အတွက် နောက်ဆုံးပုံတူစနစ်၏အကူအညီဖြင့် ဆဲလ်အတွင်း nucleic acid မျိုးဗီဇကို လက်ခံထားသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများကို စုဆောင်းပြီးနောက်၊ ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ နမူနာများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များ၏ ရှင်သန်မှုအချိန်ကို တာရှည်စေရန် သို့မဟုတ် lysate ဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို အသက်မသွင်းဘဲ၊ ဗိုင်းရပ်စ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းအချို့ (ဥပမာ- nucleic acid နှင့် antigen protein) တို့ကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးသည်။
တခါသုံးဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်ကို နမူနာပြွန်၊ ဦးထုပ်၊ VTM ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက်နှင့်/သို့မဟုတ် နမူနာပြွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သက်တမ်း- 12 လ
မှတ်ချက်- နမူနာကို နမူနာပြွန်ထဲတွင် ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းကို 2-8 ℃ တွင် သိမ်းဆည်းပြီး ပို့ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
နမူနာများကို စုဆောင်းပြီး3ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်သင့်ပြီး သိုလှောင်မှု အပူချိန်သည် 2-8 ℃ ဖြစ်သင့်သည်။ 72 နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ မပို့နိုင်ပါက ၎င်းတို့ကို - 70 ℃ သို့မဟုတ် အောက်တွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီး နမူနာများကို ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲပြီး မှေးမှိန်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
ကလေးများအတွက် Sinusitis Sponge Swab
တစ်ကြိမ်သုံးရန်အတွက် CERVICAL sampling swab
လိပ်စာ- ၄ လွှာ၊ ၁၃ အဆောက်အဦ၊ Lihao စက်မှုပန်းခြံ၊ Ainan လမ်း #78၊ Longgang ခရိုင်၊ Shenzhen၊ 518116၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ တရုတ်
ဖုန်း : +86 0755 28591602
J.able Bio VTM နမူနာပြွန်အစုံ-...
J.able Bio သည် CE-IVD အတွက် အတည်ပြုချက်ရထားပြီး...
J.bale Bio : အသက်မဝင်သော...
J.able Bio Co., Ltd. သည် ISO13485 မှ အတည်ပြုထားသည်။
© မူပိုင်ခွင့် - 2021- All Rights Reserved. Hot Products များ - ဆိုက်မြေပုံ
Viral Transport Media Kit, Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု, Self Standing Centrifuge Tubes များ, Sterile Microcentrifuge Tubes များ, Falcon Centrifuge Tubes 15ml, Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ,